यो हो जडिबुटी नखाई छोएको भरमा जस्तोसुकै विष काट्न सफल औषधि, जानी राखौ
जडिबुटी नखाई छोएको भरमा जस्तोसुकै विष काट्न सफल औषधि
अक्टोबर 1, 2019 अक्टोबर 1, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments	अपमार्ग, दतिवन
अपमार्गलाई नेपालीमा दतिवन भन्दछन् । यो जडिबुटीको धार्मिक महत्व ठूलो छ । तिजमा महिलाहरुले आफुले गरेका पापहरू नष्ट होस् भनेर प्रयोग गरेको पाइन्छ । यो जडिबुटी नेपालमा प्रशस्त पाइन्छ । अपमार्गको चामलको भात बनाएर खाएमा एक हप्तासम्म भोक लाग्दैन भनेको छ ।
नेपाली भूमिमा यस्ता अनेकौं जडिबुटी छन् जसले छोएको भरमा रोग निको पार्न सफल छन् । आज मैले अपमार्गबाट सर्पले टोक्दा या बिच्छिले टोक्दा अपमार्गको ताजा रस लगाउनुको साथै २ चमच जति खान दिनाले बिष चढ्दैन भनेको छ ।
नेपाली भुभागमा यस्ता चमत्कारिक औषधि छन् तर हामीले फाइदा उठाउन सकि रहेका छैनौं । आउनुस आज म यसवाट कसरी उपचार गर्ने भन्नेबारे प्रकाश पार्नेछु । यो जडिबुटी तान्त्रीक जडिबुटी अन्तर्गत पर्दछ ।
जडिबुटी भनेको राष्ट्रको सम्पत्ति हो तर यसलाई प्रयोग नहुदा अर्थतन्त्रमा समेत नोक्सान भएको छ । सरकारले यस्ता जडिबुटी संकलन गरेर बेच्ने ब्यबस्था मिलाउन सके डलर भित्र्याउन सकिने देखिन्छ ।
सहि वस्तुको पहिचान हुन आवश्यक छ । यदि हामीले यस्ता जडिबुटीबाट उपचार गराउछौं भने अनावश्यक पैसा खर्च हुनबाट बचाउनेछौं । जहाँ विश्वास छ त्याहाँ शक्तिछ । आउनुस अपमार्गबाट कसरी विष हटाउन सकिन्छ जानौं ।
बिष हटाउन कसरी प्रयोग गर्ने
१. बिषालु‌ जन्तुले टोकेको ठाउमा यो औषधि पिसेर बाध्नाले बिष हटाउनुको साथै सुनिएको समेत निको हन्छ ।
२. कुनै पनि विषालु जन्तुले डसेको भए अपमार्गको डाँठ चार चार अगुला बराबरको काटेर राख्ने र कानको प्वालमा राख्ने बलियोसंग छोप्ने यदि शरीरमा जहर भए कानभित्र तान्छ तर भित्र जान नदिने यसरी छोपी राख्दा भित्र जान छोडेमा जहर समाप्त भएको एकिन गर्नुपर्छ ।
३. सर्पले टोक्दा या बिच्छिले टोक्दा अपमार्गको ताजा रस लगाउनुको साथै २ चमच जति खान दिनाले बिष चढ्दैन भनेको छ ।
नोट : विषालु सर्पले टोकेकोमा डाक्टरको परामर्शमा उपचार गराउनुपर्छ । यसैको भरमा बस्नु हुदैन । प्राथमिक उपचार गरिसकेपछि केहि सुधार नदेखेमा तुरून्त रिफर गर्नु राम्रो हुनेछ ।
← भद्दा स्तनलाई कसरी सानो साइजमा ल्याउने सरल उपचार
हरियो साग खाउँ, निरोगी बनौं →
सेप्टेम्बर 3, 2019 अक्टोबर 1, 2019 साइन्स इन्फोटेक	3